जनतासमाचार डट्कममा शुक्रवार प्रकाशित समाचारका मुख्य अंशहरू :
१.सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले गत मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषदको बैठक दुषित र कपटपूर्ण भएको बताउनुभएको छ। सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै सभामुख सापकोटाले नियम र कानुन मिचेर कपटपूर्ण तरिकाले बसेको बैठक र उक्त बैठकले गरेको निर्णय कपटपूर्ण भएको भन्दै बदरको भागीदार भएको बताउनुभएको हो ।
२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी विशाल भट्टराईलाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका उक्त समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको हो ।
३.सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराईएको भन्दै पीडितहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार बृहत नागरिक समाज, बृहत नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक संघर्ष समिति र नेवाः देः दबु लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुको आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।
४.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको आधिकारीक धारणा सञ्चार माध्यमको आधारमा मात्र नबुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको धारणा र नेताको विचार सञ्चार माध्यमबाट नभएर आधिकारिक ठाउँबाट नै बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको हो।
५.प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले गत पुसदेखि रोकएको तलब सुविधा एकमुस्ट पाउने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै गत पुस पाँच गतेदेखि रोकिएको तलब सुविधा संसद पुन:स्थापना भएसँगै एकमुष्ठ पाउने भएका हुन् ।
६.नेपालमा ३६ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा २८ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु पढ्छन् । विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्यामा भएको यो वृद्धिले शिक्षमा पहुँच र सहभागिता उल्लेख्य बढेको देखाउँछ । तर कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये ६२ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी १० कक्षा नपुग्दै विद्यालय छाेड्छन् । यसले नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा शैक्षिक क्षतिको मात्रा ठूलो रहेको प्रष्ट पार्छ । भर्ना भएका बालबालिकाले पनि विद्यालयमा के–के सिक्नुपर्ने हो र सिकेका छन् भन्ने विषयमा सन्तोषजनक जवाफ दिन सकिएको छैन ।
७.तारकेश्वर नगरपालिकामा बर्डफ्लू भेटिएको छ । बर्डफ्लू देखिएपछि साङ्लाफाँटमा बिहीबार साढे १२ हजारबढी कुखुरा नष्ट गरिएको हो ।यसअघि पनि गत माघमा नगरपालिकामा बर्डफ्लू देखिएको थियो ।बर्डफ्लू देखिएसँगै केन्द्रीय बर्डफ्लू समन्वय समितिको बैठक बसिरहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ
८.नेत्रविक्रम चन्द समूहका मुस्ताङ जिल्ला इन्चार्ज पदम पुन (फिल्टर) पक्राउ परेका छन् । बिहीबार साँझ मालिका गाउँपालिका-२ बाट पुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङको टोलीले पक्राउ परेको हो । पक्राउ पछि उनलाई बेनी ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुनलाई पक्राउ गरेकोे हो ।
९.नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अर्को साता फैसला गर्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यो मुद्दाको निसु (निर्णय सुनाउने) २० गतेलाई तोकेको हो ।
१०.बेनी नगरपालिका–४ फापरखेतमा बिहिबार राती भएको जिप दुर्घटनामा १ जनाको भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन् । मालिका गाउँपालिका–३ पात्लेबाट बिरामी लिएर बेनीतर्फ आउँदै गरेको ग १ ज ६७८८ नम्बरको जिप सडकबाट म्याग्दी नदीमा खसेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायव उपरिक्षक श्यामकुमार राइले मालिका–३ का ६२ वर्षीय गोबिन्द रोकाको बेनी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो ।
११.शुक्रबार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पनि फरक–फरक विषयका समाचारलाई महत्वका साथ छापेका छन्। पत्रिकाहरूमा संवैधानिक नियुक्तिलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाले असर नगर्ने, सत्ता सोजेदारीका लागि दाहाल नेपालको दौडधूप, सक्लान् आर्थिक अपराधि पत्ता लगाउन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य लगायतका शीर्षकमा प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्।
१२. स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क सेनिटाइजर, क्लोरिनलगायत स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा चार गुणा महँगो खरिद गरेको पाइएको छ । बजारमा प्रति थान चार रुपैयाँमा पाइने मास्क सात रुपैयाँ, ५ लिटरलाई ८ सय ५० देखि ९ सय रुपैयाँ पर्ने फ्लोरोना सेनिटाइजर ३ हजार ५ सय, ५ देखि ७ सय रुपैयाँ पर्ने क्लोरिन २ हजार ५ सय रुपैयाँमा मन्त्रालयले खरिद गरेको पाइएको हो ।
१३. सुर्खेतमा बर्डफ्लु भेटिएपछि पनि छिमेकी जिल्ला बाँकेमा भारतबाट अवैध रूपमा भइरहेको कुखुराको आयात रोकिएको छैन काठमाडौँ र सुर्खेतमा बर्डफ्लु भेटिएपछि प्रहरी प्रशासनले भारतबाट कुखुरा आयात गर्न नदिने बताइरहेको बेला आयात जारी देखिएको हो ।
१४.विश्वभरमा आठ करोड ९१ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन् । शुक्रबार बिहानसम्ममा आठ करोड ९१ लाख नौं हजार दुई सय ५९ जना संक्रमित कोरोनामुक्त भएका हुन् ।
१५.स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क सेनिटाइजर, क्लोरिनलगायत स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा चार गुणा महँगो खरिद गरेको पाइएको छ । बजारमा प्रति थान चार रुपैयाँमा पाइने मास्क सात रुपैयाँ, ५ लिटरलाई ८ सय ५० देखि ९ सय रुपैयाँ पर्ने फ्लोरोना सेनिटाइजर ३ हजार ५ सय, ५ देखि ७ सय रुपैयाँ पर्ने क्लोरिन २ हजार ५ सय रुपैयाँमा मन्त्रालयले खरिद गरेको पाइएको हो ।
१६.बेनी नगरपालिका–४ फापरखेतमा बिहिबार राती भएको जिप दुर्घटनामा १ जनाको भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन् । मालिका गाउँपालिका–३ पात्लेबाट बिरामी लिएर बेनीतर्फ आउँदै गरेको ग १ ज ६७८८ नम्बरको जिप सडकबाट म्याग्दी नदीमा खसेको हो ।
१७.नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अर्को साता फैसला गर्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यो मुद्दाको निसु (निर्णय सुनाउने) २० गतेलाई तोकेको हो ।
१८.नेत्रविक्रम चन्द समूहका मुस्ताङ जिल्ला इन्चार्ज पदम पुन (फिल्टर) पक्राउ परेका छन् । बिहीबार साँझ मालिका गाउँपालिका-२ बाट पुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङको टोलीले पक्राउ परेको हो । पक्राउ पछि उनलाई बेनी ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुनलाई पक्राउ गरेकोे हो ।
१९. इंग्लिस क्लब लेष्टर सिटी युरोपा लिग फुटबलको अन्तिम ३२ बाट बाहिरिएको छ । बिहीबार राति सम्पन्न अन्तिम ३२ को दास्रो लेगमा एसके स्लाभियासँग २-० गोल अन्तरले पराजित हुँदै लेष्टर सिटीले युरोपा लिगबाट बिदा लिनु परेको हो । पहिलो लेगमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएको लेष्टरले दोस्रो लिगमा स्लाभियासँग २-० ले पराजित भएको हो ।
२०.तारकेश्वर नगरपालिकामा बर्डफ्लू भेटिएको छ । बर्डफ्लू देखिएपछि साङ्लाफाँटमा बिहीबार साढे १२ हजारबढी कुखुरा नष्ट गरिएको हो । यसअघि पनि गत माघमा नगरपालिकामा बर्डफ्लू देखिएको थियो ।बर्डफ्लू देखिएसँगै केन्द्रीय बर्डफ्लू समन्वय समितिको बैठक बसिरहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
२१.शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेको छ । आज बजारमा छापावाला सुन ८८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको । तेजावी सुन प्रतितोला ८८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
२२.नेपाली कांग्रेसका नेता नवीनन्द्रराज जोशी अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ । ५७ वर्षीय जोशी शुक्रबार बिहान मतिष्कघात भएसँगै अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो । उहाँको नर्भिक अस्पताल थापाथलीमा उपचार भइरहेको छ। उहाँको मस्तिष्कमा रगत जमेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
२३. बाराका युवाहरु पछिल्लो समय च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन् । युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले जिल्लाका युवाहरुले च्याउ खेती शुरु गरेका हुन् ।
२४.चीन सरकारले काठमाडौंको दरबार हाई स्कुललाई शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ । चिनियाँ नयाँ वर्षको उपलक्षमा चीन सरकार र चिनियाँ जनताको तर्फबाट स्टेसनरी सामग्री, खेलकुद सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री तथा ड्रेस सहयोग गरेको छ ।
२५.चार दिनदेखि बेपत्ता पिपरा गाउँपालिका–५ सहोडवाको वृद्ध दम्पतीको अझै पत्ता लागेको छैन । सोमबार देखि हराइरहेका पिपराका ६५ वर्षीय मोसाफिर झा र उनकी पत्नी ६० वर्षीया गीतादेवीको अवस्था बारे प्रहरीले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
२६.नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि फाराम भर्नेको सङ्ख्या पाँच लाखभन्दा बढी हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीलाई एक महिनाभित्रमा अनुमतिपत्र दिइसक्ने योजना बनाएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा कार्ड छाप्ने उपकरण (मास प्रिन्टर) को प्रयोग गरेर एकैदिनमा धेरै सङ्ख्यामा अनुमतिपत्र छाप्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
२७.पशुपतिनाथमा अब ‘क्यूआर कोड’ प्रणालीमार्फत भेटी दान गर्न सकिने भएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण प्रवेशद्वार, जुत्ता चप्पल कक्ष, महास्नानघर अघि र मूल मन्दिर परिसरमा राखिएको ‘क्यूआर कोड’ मार्फत भेटी दान गर्न सकिने भएको छ ।
२८.पूर्व उद्योगमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नदेखिएको अस्पतालले बताएको छ । शुक्रबार दिउसो पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटलका चिकित्सक डा. राजीव झाले जोशीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकाले भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेकाे र सुधार नदेखिएकाे बताउनुभएकाे हाे ।
२९. राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा शुक्रबार सातदोबाटो युथ क्लबले खुमलटार युथ क्लबलाई पराजित गर्दा दिनको दोस्रो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसियसनले टुसाल युथ क्लबलाई हराउँदै जारी लिगमा पहिलो जित निकालेका छन् ।